Tag: hafainganana | Martech Zone
Na dia mitantana ny fisoratana anarana amin'ny sehatra amin'ny registrar domain ianao, tsy hevitra tsara foana ny mitantana ny toerana sy ny fomba hamahana ny fidirana DNS hafa rehetra hamahana ny mailaka, ny subdomain, ny host, sns. dia mivarotra domains, tsy manome antoka fa afaka mamaha haingana ny sehatra misy anao, mitantana mora ary manana fihenam-bidy. Inona ny fitantanana DNS? Ny DNS Management dia sehatra mifehy ny mpizara Domain Name System
Fomba 15 hampitomboana ny tahan'ny fiovam-po amin'ny ecommerce
Saturday, May 28, 2016 Alahady, Desambra 24, 2017 Douglas Karr
Niara-niasa tamin'ny fivarotana vitamina sy famenon-tsakafo an-tserasera izahay mba hanampiana amin'ny fampitomboana ny fahitana azy ireo sy ny tahan'ny fiovam-po. Nandany fotoana sy enta-mavesatra be ny fifamofoana, saingy efa manomboka miseho ny valiny. Ny tranonkala dia mila refy ary havaozina hatrany ambony. Na dia tranokala niasa tanteraka teo aloha aza izy io dia tsy nanana singa ilaina loatra hananganana fahatokisana sy hanamorana ny fiovam-po
Generation CDN Generation manaraka dia miresaka bebe kokoa noho ny cache fotsiny
Zoma, Aogositra 14, 2015 Jason miller
Ao amin'ny tontolon'ny fifandraisana misy hyper, ny mpampiasa dia tsy mandeha amin'ny Internet, Internet an-tserasera izy ireo ary ny matihanina amin'ny marketing dia mitaky teknolojia vaovao hanomezana traikefa mpanjifa kalitao. Noho io antony io dia maro no efa mahalala ny serivisy klasika an'ny tamba-jotra fanaterana votoaty (CDN), toy ny cache. Ho an'ireo izay tsy dia mahazatra loatra ny CDN, dia amin'ny alàlan'ny fitahirizana vonjimaika ny lahatsoratra tsy miova, sary, feo ary horonan-tsary amin'ny mpizara, ka amin'ny manaraka ny mpampiasa